I-Adobe iya kukumangalela ukuba usebenzisa uhlobo lwakudala lweenkqubo zazo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Adobe ilumkisa: ukuba usebenzisa i-Photoshop endala ungamangalelwa
Los Iinkqubo ze-Adobe yenye yezona zisetyenziswa kakhulu kwihlabathi kwaye yenye yezona ziphangiweyo emhlabeni. Kananjalo, enkosi koku, ivumele abayili abaziingcali ukuba babenakho ukuzisebenzisa kwiminyaka yabo yokufunda.
Kodwa kubonakala ngathi yile xa ufuna ukucofa amaphiko abo bonke abo ezisebenzisa naziphi na iinkqubo zakho ezindala, ezinjengeFotohop uqobo. Kwaye iye yalumkisa ukuba iya kunyanzelisa ukugwetywa kwabo bonke abasebenzisa iinguqulelo ezindala.
Sele sikwazisile kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo nge-infographic ekumemayo ukuba uyisebenzise ezinye iinkqubo ngaphandle kweAdobe Kwaye bayakwazi ukuba zizixhobo ezikhulu zemihla yethu yemihla ngemihla zokuyila okanye zokuyila.
Xa iAdobe okwangoku ikuvumela ukuba uyihlawuleleIlifu lokudala ukubhaliswa kwenyanga okanye uguqulelo lwangaphandle, Abasebenzisi abaninzi bafumana imiyalezo yokophula umthetho ukuba bayaqhubeka nokusebenzisa iinguqulelo ezindala ezingasekelwanga.
Lumkisa ukuba nabani na osebenzisa ezo nguqulelo zangaphambili unakho Zibone ukwindawo yokumangalelwa ukophulwa kwamalungelo abantu besithathu. Konke oku kunento yokwenza neDolby emangalela iAdobe ngoMatshi yokusebenzisa gwenxa iphepha-mvume lenkampani.
Ke adobe usebenzise eso sizathu sikaDolby awukwazi ukusebenzisa iinguqulelo ezindala ukulumkisa ukuba usebenzisa i-Photoshop okanye i-Premiere unokufumana isimangalo. Ingxaki ikwayiyo yokuba iinguqulelo zamva nje zeCreative Cloud 2019 zinzima ekusebenziseni izixhobo kwaye zifuna ukuba Windows 10 ifakwe, ke ezo nkampani kunye neengcali ezisenayo Windows 7 okanye 8 kufuneka baqwalasele ukuba benze ntoni.
Njengoko besitshilo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, nantsi infographic ebonisa ezinye iindlela zokwenyani los ezona nkqubo zidumileyo zeAdobe. Kukho ezasimahla okanye ezihlawulelweyo ezinje nge-Affinity's ezingabizi kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » I-Adobe ilumkisa: ukuba usebenzisa i-Photoshop endala ungamangalelwa
Ngubani owayeza kusixelela ukuba ngenye imini siza kuyifumana le mbono kaMickey Mouse
Yenza iifonti zekinetic ezintle kwaye ziyamangalisa nge-app ye-EnFont eyoyikisayo yewebhu